संसारभर रुचाइएको पिज्जा, कसरी बनाउने ? | Chhatapost.com
Home Breaking News संसारभर रुचाइएको पिज्जा, कसरी बनाउने ?
बालबालिका खानामा निकै चुजी हुन्छन् । उनीहरुलाई घरको दाल–भातबाहेक फास्ट फुडतिर बढी रुचि हुन्छ । त्यसमा पनि पिज्जा प्रायः बालबालिकाहरुलाई मन पर्छ । कहिलेकाहीं घरमा ठूलो जमघट हुँदा बालबालिकालाई भुलाउन के बनाइदिने वा ल्याइदिने भन्ने अन्योल हुन्छ । बत्तीसपुतलीकी व्यवसायी एवम् पूर्वपाइलट जिना लिङ्देनले भने घरमा जमघट हुनुपूर्व नै रेष्टुरेन्टबाट पिज्जा मगाइसकेकी हुन्छिन् । उनका दुबै छोराछोरीलाई पिज्जा औधी मन पर्छ । जिनाले जस्तै अचेल धेरैले छोराछोरीलाई पिज्जा किनिदिने गरेका छन् । पिज्जा खुवाउनकै लागि छोराछोरीलाई रेष्टुरेन्ट लैजाने पनि बढेका छन् । कुपण्डोलस्थित ब्रिक्स क्याफेका संचालक मोहितबंश आचार्य आफ्नो रेस्टुरामा धेरै रुचाइएको परिकार मध्ये पिज्जा एक भएको बताउँछन् ।
रुचाइएका पिज्जाहरु- क्यालिफोर्निया पिज्जा, सिकागो स्टाइल पिज्जा, चकलेट पिज्जा, इरानीयन पिज्जा, ग्रीक पिज्जा, हवाइन पिज्जा, मिटबल पिज्जा, मेक्सिकन पिज्जा, सुसी पिज्जा, मसरुम पिज्जा, सलामी पिज्जा, ससेज पिज्जा र मार्गेरिता पिज्जालाई संसारमै सर्वाधिक रुचाइएको छ ।
पिज्जा बेसको लागि आवश्यक सामग्री : (पीठो ) मैदा वा आँटा, इस्ट, नून, ओलिभ ओयल तथा तातो पानी ।
Previous articleषड्यन्त्रको एक घटनाः भक्तपुर काण्ड
Next articleविद्यालयहरू बन्द भएपछि जापानमा बालबालिकाको आत्महत्या दरमा वृद्धि